Ixesha kunye nabahlobo 19
Yintoni ukuzalwa kukaThixo okanye ukuzalwa koMntu oPhezulu?
Ibinzana elithi incarnation lithetha into eye yangena emzimbeni wenyama. Umzimba waphezulu uthetha ubuThixo obukwisimo senyama. Ukomelela kobuThixo kuthetha enye yeembonakalo ezininzi zoBuntu ngendlela yomntu, ubumnandi obuyonwabisayo, okanye ubuqaqawuli bobuThixo njengoko bebizwa njalo, sele kukhankanyiwe kuyo yonke imbali yezenkolo. Inkangeleko yomzimba wobuThixo ihamba ngokusungulwa kwenkolo entsha, ethatha igama kuyo kwimbonakalo okanye inikwe igama ngabalandeli bamva. Ifilosofi, uThixo, i-Universal Mind, okanye ubuThixo, yingqokelela eqokelelweyo yeeNgqondi zikaThixo ezigqithe ngaphezulu kwemfuneko yokuphindukuzalwa kwakhona nangaphandle kwabo bonke ubuthathaka kunye nobuthathaka bomntu. Le ndedeba idibeneyo yabukrelekrele abangabakaThixo ngamanye amaxesha kuthiwa yiLogos. Ngamaxesha alawulwa ngumthetho, omnye wale ndwendwe i-Divine, okanye i-Universal Mind, okanye u-Thixo, ubonakala emhlabeni ukunceda abantu kwinkqubela-phambili kunye nophuhliso lwabo lokungafi. Xa umcimbi onjalo usenzeka kuthiwa ngumzimba wokusindisa umntu obonakalayo, weLogos, iDemiurgos, i-Universal Mind, uBuntu, uMoya oMkhulu okanye uThixo, ngokwesigama sabantu abarekhoda umcimbi . Kukho ifilosofi eqaphelekayo eqhotyoshelwe kumsitho onjalo, kwaye kukho iidigri ezininzi kunye neendidi zemiqondiso kaThixo. Kodwa ukuphendula ngokuthe ngqo umbuzo malunga nokufakwa kumzimba kaThixo ngOyena Uphakamileyo kukuba umntu wasemkhosini oPhezulu uthathe indawo yokuhlala enomntu ofezekileyo onyanisekileyo kwaye onenkqubela phambili, ngokwasemzimbeni, ngokwengqondo nangokomoya, ukuze aqinisekise ukuba unxibelelwano lobuThixo.
Yintoni ekusebenziseni okanye kumsebenzi wequmrhu lomzimba?
Ngokomzimba, olona luvo luphambili ngokubhekisele kumzimba wepitu kukuba sisihlalo esilawulayo okanye iziko lenkqubo yemithambo-luvo. Luqulathe ii-lobes ezimbini, i-lobe yangemva iyinto efumana yonke imbonakalo yomzimba kwi-sensory nerves, kunye ne-engile yangaphandle yinto ekuya kulawulwa kuyo iintlaselo zemoto kwaye zibhekiswe kuzo. Singathi umzimba we-pituitary yentliziyo yenkqubo ye-neva njengoko intliziyo yemisipha isisiseko senkqubo yokujikeleza. Njengoko igazi lihamba lisuka entliziyweni liye emzimbeni ngokuhamba ngemithambo lize libuyele ngendlela yamathambo ukuya entliziyweni, ke ngoko kukho isoytshi emanyumnyezi okanye i-ether ejikeleza umzimba usuka emzimbeni wethambo ngendlela yemithambo yeemoto kwaye umva ngokusebenzisa imithambo-luvo kumzimba wepituitary. Umzimba we-pituitary liziko elisebuchotsheni apho i-Ego yomntu idibana khona nomzimba wokomzimba, kwaye iziko i-Ego yomntu idlula kwiingingqi ezaziwa ngokuba kukuvuka, ukuphupha, kunye nobuthongo obukhulu. Xa i-Ego yomntu isebenza ngokuthe ngqo okanye kunye nomzimba womzimba we-pituitary kuthiwa uphaphile kwaye uqaphele umzimba wakhe kunye nehlabathi elijikeleze yena. Xa i-Ego ithatha umhlala phantsi ekunxibelelaneni kwangoko okanye kulawulo lomzimba we-pituitary, yenza oko ukuze umzimba uphumle kwaye uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde ube ngumzimba wobomi behlabathi obungena kwaye uphume emzimbeni, xa ungaphazanyiswa kukuxinana okuzisiweyo ngokusebenza kwengqondo kunye nomzimba okanye womzimba. Njengoko ingqondo okanye i-Ego ikhulula ukubamba kwayo emzimbeni we-pituitary kwaye iphinde iphumle kunye namanye amaziko obuchopho ukuphupha, kwaye ukuziswa kobuthongo obunzulu kunye neemeko zabo eziphakathi kuyenziwa.
Iyintoni ukusetyenziswa okanye umsebenzi wegineyini yepineal?
Zombini umzimba we-pituitary kunye ne-pineal gland zizitho ezingamaziko okunxibelelana komphefumlo womntu. Kodwa lo gama umzimba womzimba uliziko elisetyenziswa ngokuthe ngqo ngengqondo yomntu kuzo zonke izinto ezifuna ukwenziwa kwengqondo, i-pineal gland lilungu apho ulwalamano oluphezulu nolunobuntu bomntu lunxulumene khona. Umzimba we-pituitary usetyenziswa kuzo zonke iinkqubo zokulinganisa kunye nokusebenza kwengqondo efuna umsebenzi wamandla okuqiqa. I-pineal gland isetyenziswa xa ulwazi ngqo lwento luya kufunyanwa. I-pineal gland lilungu eliziswa ngalo ekuqondeni komntu ukuba ulwazi nobulumko bugqibelele buzibonakalisa, ngaphandle kwenkqubo yokuqiqa. Umdiliya wepineal lilungu elisetyenziswa ngobunono nangobukrelekrele ngumntu onokuqonda kokomoya kunye nobulumko. Oku kusebenza kwizilumko ngokomoya. Kuluntu oluqhelekileyo umzimba we-pituitary usetyenziswe ngaphandle kolwazi lwayo kwangoko ngendlela efanayo enokucinga kodwa engazi ukuba ucinga njani. Kwindoda eqhelekileyo i-pineal gland ibubungqina obukhoyo kumathuba woBuntu obuzayo lomntu. Kodwa ngoku kuthe cwaka njengengcwaba.
Iyintoni ukusebenzisa okanye umsebenzi wepeni?
I-spleen lelinye lamaziko e-astral okanye yomzimba. I-spleen isebenza ikakhulu kubomi bokuqala ukuseka ubudlelwane phakathi kweemolekyuli, i-astral fomu yomzimba kwisakhiwo sezinto ezibonakalayo, ngenkqubo yokujikeleza. Inxulumene kokubini nokujikeleza kwegazi kunye nenkqubo ye-lymphatic. Emva kokuba umzimba usekwe kwimikhwa yawo kwaye indlela yomzimba sele isungulwe ngokuqinisekileyo, i-spleen inokusasazwa ngenxa yokuba umzimba wefomali ye-astral ke uhleli kuwo onke amalungu omzimba.
Yintoni ekusebenziseni okanye umsebenzi wegciwane le-thyroid?
Umsipha we-thyroid lelinye lamaziko emzimbeni apho iziko liza kuthatha kuwo umzimba ngaphambi kokuba lizalwe. Inxulumene ngokuthe ngqo nomzimba wepituitary kwaye yindawo yokugcina okanye ibhetri ekukhutshwe kuyo izithako ezithile zemichiza eziyimfuneko kwisakhiwo somzimba, kwaye ibambe ne-tincture esebenza egazini. Umngundo we-thyroid lilungu elinokuthi ingqondo lisebenze emzimbeni. I-thyroid gland, umzimba we pituitary kunye ne-pineal gland konke oku kunento yokwenza nokwakheka komzimba kunye nengqondo. Xa la machaphaza amachaphaza echaphazeleka aphazamisana nentshukumo eqhelekileyo yengqondo kwaye kwiimeko ezininzi kuya kubangela ukufa okanye oko kuchaphazele ingqondo njengokuzisa i-idiocy yethutyana okanye ukuthunyelwa kwengqondo.